Marka laga hadlayo daalacayaasha, waxba hagaagsan | Laga soo bilaabo Linux
Mar kasta oo arrin sida xasaasiga ah u doorbideysa isticmaale dhanka codsi gaar ah la taabto, doodda muranka dhalisay waxaa la sameeyaa halkaas oo qof walbaa isku dayo inuu ku qanciyo qof kasta oo akhriya faallooyinkiisa dooddooda.
Taasi waa iska caadi, markasta oo aan faallo ka bixinno waxaan halis ugu jirnaa inaan lumino himilada iyadoo la adeegsanayo dookhyada shaqsiyeed ee aasaaska u ah doodahayaga. Aniga qudhaydu waxaan galay dembigaas dhowr jeer, gaar ahaan markaan ka hadlayo Firefox, Chrome iyo daalacashada kale.
Waana in adduunka maanta biraawsarku yahay aalad aad muhiim u ah, oo ay ku tiirsan yihiin wax soo saarkeenna, madadaaladayada iyo hawlo badan oo aan caadiyan qabanno maalin kasta. Ogaanshaha sida loo doorto ikhtiyaarka ugu fiican xaga xawaaraha, waxqabadka, isticmaalka, waxay noqon kartaa a Howlgal aan macquul aheyn qaar. Taasi waa sababta aan isku dayi doono in muddo ah in aan dhinac iska dhigo waxa aan jeclahay oo aan idinla wadaago waxyaabaha uu biraawsar kasta seego.
Waxaa kaa maqan akhristaha RSS: Xitaa ma lahan wax aasaasi u ah waxa Firefox ay ka mid tahay si loo muujiyo wararkii ugu dambeeyay ee bogagga aan ka helno.
Weli waxaa ka maqan kordhinno badan: Qeybtaan, Firefox weli waa boqor.
U adeegso doorsoomayaasha caalamiga ah wakiilka: sidaas darteed Opera sida Firefox waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku kaydin karaan wakiil iyaga oo aan ku xirnayn nidaamka loo adeegsaday, Chrome / Chromium no.
Maareeyaha Soo dejinta oo aad u liita: Marka loo barbardhigo Opera's, maareeyaha soo dejinta ayaa aad uga dambeeya.
Dhaji oo tag: Chrome ma lahan wax sidan u fudud. Opera wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee ku soo daray oo Firefox ayaa raacday.
Nidaamka kordhinta ee gaboobay Haddii wax fiican leedahay Chrome / Chromium, ayaa ah inaad u isticmaali kartid isla kordhin nooc kasta oo biraawsarka ah iyo wixii ka sarreeya oo dhan, waad rakibi kartaa oo aad ka tirtiri kartaa adigoon dib u bilaabin. Tani waa wax a Firefox weli ku dhufo.
Garaac Degdeg ah: Inta badan daalacashada ayaa horeyba loogu soo daray Wicitaan Degdeg ah (o Wareeg degdeg ah sidaad doorbiday) ugu talagal Ma aha wax aan kordhintu xallin karin, laakiin waa wax si weyn loo qiimeyn lahaa.
Liis badan oo midaysan: Ma aqaano haddii "waxsoosaar" ay tahay ereyga saxda ah, laakiin menu-ka mideysan ee Firefox waxay ka tagtaa waxyaabo badan oo la doonayo. Mararka qaarkood waa inaad isticmaashaa baarka menu-dhaqameedka si aad u hesho xulashooyinka qaarkood.
Maareeyaha Soo Dejinta: La mid ah ChromeWaxa kale oo ku jira labadaba oo aan haysan taageero togag ah. Hadaan qaldanahay fadlan i sax.
Muujinta goobta: Bogag badan oo aan caadi ahaan ka helo si fiican ugama muuqdaan gudaha Opera. Ama ugu yaraan qaar ka mid ah cunsurradeeda.
Isticmaalka RAM sare: Opera Waa biraawsarka leh isticmaalka ugu sarreeya dhammaan waxyaabaha laga helo suuqa. Ma aqaano inay ku xirnaan doonto wax kasta oo ay ka mid tahay.
Summada xiran: Waa kan ugu xiran dhammaan (kuma jiraan IExplorer) maxaa macquul ah oo sababa in aysan laheyn kooto weyn suuqa.
Liidata kordhinta: Aad iyo aad bey u liidataa xaga kordhinta iyo kuwa aan isku dayay ma laha tayo aad u wanaagsan.
Kuwani qiyaas ahaan waa waxyaabaha aniga sida ugu badan ii saameynaya mid kasta oo ka mid ah bog furayaashaas. Seddexduba waxay leeyihiin wanaag badan oo aan mudneyn in hadda la xuso, sida taakuleynta HTML5 y CSS3Laakiin xitaa marka laga hadlayo arrintan, qaar baa ka badan kuwa kale.
Marka su’aashaydu waxay tahay: Maxaad seegtay mid kasta oo daalacashada ah? Dabcan wuxuu ka helay dhadhankiisa iyo khibradiisa shaqsiyeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Marka ay timaado daalacashada, wax hagaagsan ma jiraan
Hagaag, marar badan waxyaalaha lama sameeyo maxaa yeelay lama codsan, tani waxay igu dhacday aniga barnaamijyo badan oo furan, marka uu maqnaado marwalba waad weydiin kartaa, waxaan u maleynayaa in soo-saareyaasha chromium loo diri karo codsi, kuwa ka shaqeeya talo soo jeedin iwm iwm
Waxaan u adeegsadaa Firefox, chrome iyo opera, sida aan rabo ramadaha, waxaan ku xaliyay anigoo 8 gb ku shubaya laptop-ka.
Waan jeclahay dhammaan 3.
Ha! Hadday wax walba fudud ahaan lahaayeen sidaas. Xitaa kumbiyuutar ma haysto ¬¬
Xalka ugu Fiican LOL XDDD
Waan oggolahay wixii khuseeya Chromium iyo Firefox.
Xagga daadka, waxaa jiray waqti dheeri ah (Firetorrent waxaan u maleynayaa in loo yeeray), laakiin mashruuca waa la xiray (ma xasuusto sababta)
In kasta oo aan u adeegsaday Chromium inuu noqdo biraawsarka aasaasiga ah in muddo ah ayaan dib ugu noqday Firefox waxaanan u malaynayaa inaan la sii socon doono muddo dheer
Waxaan kubilaabay Firefox waxaanan kusoo bandhigayay Chrome (hada Birta) waxyar usameeya add-addka aan kusoo xusay boostada aan sameeyay XD Laakiin runta ayaa ah in Birtu ay aad uga dhaqso badantahay Firefox, lagana yaabo inaysan lahayn waxbadan kudar -oo sidan oo kale ah, laakiin runtu waxay tahay anigu uma maleynayo inaan haysto wax aan ka hinaaso, maxaa yeelay waxay leedahay wax kasta oo aan u baahanahay, marka lagu daro, omnibox waa mid aad u raaxo badan, in kasta oo aan wali u adeegsado Firefox (si fiican, si sax ah Iceweasel) waxyaabaha qaarkood, guud ahaan waxaan u isticmaalaa Birta.
Dhanka Opera, wax badan ayey cuntaa, kordhintuna waa mid liidata, sidii horay loo sheegay, wax badan igama dhaadhicin. Xaqiiqdii, waxaan adeegsadaa Opera, laakiin mobilkeyga (Nokia 5800) iyo sababta oo ah waa biraawsarkaas ama kan caadiga ah ... haddii ay sii daayaan nooc ka mid ah Firefox ee Symbian, waxaan hubaal ahaan u wareegi lahaa Firefox.
Maqaal wanaagsan, kuwani waxay wax ku biiriyaan waxyaabo xiiso leh oo aan ahayn kii aan daqiiqado ka hor ka akhriyay opera, ee aan uga tagay faallo ku saabsan mawduuca.
Maqaalkani wuxuu tusaale u yahay wixii aan halkaas ugu jeedaa.
Waxaan u isticmaalaa dhowr daalac, labadaba kumbuyuutarkeyga iyo kan Android-kayga, isla sababahaas oo kale ayaad sheegaysaa, maxaa yeelay mid kastaa wax buu i siiyaa.
Kombuyuutarkeyga waxaan ku isticmaalaa Chromium, Midori iyo Firefox iyo Android-kayga waxaan ku isticmaalaa Dolphin, BoatBrowser iyo Firefox. Sababtoo ah waa tan sida ugu fiican aniga ii shaqeysa, maxaa yeelay waa tan ugu dhaqsaha badan uguna fudud iyo maxaa yeelay marna igama lumiso, siday u kala horreeyaan.
Chromium wuxuu ka maqan yahay taageerada DNI elektarooniga ah ama kaar kale oo loo yaqaan 'cryptographic card'. Hadday sidaas tahay, anigu garan maayo sida loo hawlgeliyo.
Waxaan u qorayaa tan anigoo rajeynaya in khadyadayda aan loo qaadan doonin isku day ah afduubka mawduuca ama aan ku jiheeyo jihooyin kale.
Ka dib markaan akhriyey heesta "Waan jeclahay Opera", oo ay qortay pandev92, iyo dhammaan faallooyinkii laga soo qaaday, ma caawin karo laakiin waan fikirayaa - haa, si aad ah ayaan u fikiray - inaad si uun isku dayayso inaad saxdo bogga ama, ugu yaraan, ka noqo qaska.
Mid ka mid ah kala duwanaanshaha aan ku arkay meeshan, marka loo eego barta Muy, ayaa ah in naadiga taageerayaasha iyo tifaftireyaashuba ay leeyihiin aqoon maskaxeed taas oo u oggolaanaysa inay arrimaha ugu wajahaan biseyl iyo garaad aad u sarreeya. Inbadan sidaa darteed, aragtidayda, waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan kala soocno waxa warka ah - "pandev92 iyo elav <° Linux waxay qoreen laba mowduuc oo ku saabsan Chrome / Chromium, Firefox iyo Opera daalacashada" - iyo aragti ah o tifaftirka - "pandev92 iyo elav <° Linux" ayaa ku qoray "laba mowduuc oo ku saabsan Chrome / Chromium, Firefox iyo Opera daalacashada" - ugana faalloona sida ugu habboon ee macnaha guud ee su'aasha ku jirta.
Shakhsiyan, soo bandhigida pandev92 waxay ila muuqatay inay aniga ila saxantahay - maadaama aanan arkin taas, sida khamaaraha wadada, waxaan rog rogayaa laadhuus si aan ugu xagliyo hal dhinac ("Waan jeclahay ..." la mid maaha "We Love. .. ") - sidaas uma eka falcelintiisa muuqaalka ee Eduar2 faallooyinkiisa. Waa inaad taqaanaa sida loo mideeyo dhaleeceynta iyo pandev92 xaqiiqdii waxay uqalanto dharbaaxo curcurka ... laakiin aniga mas'uul kama noqon doono fulinta ciqaabta 🙂
Horey ayaan ugu soo galay arinta halkaan looga hadlay: Waxaan u adeegsadaa Firefox iyo Opera / Opera iyo Firefox qaasatan - wey fuulaysaa / fuushaa wax badan - runtuna waxay tahay inay jiraan waxyaabo aanan xitaa ka maqnayn iyaga ... gaar ahaan maareeyayaasha soo dejinta tan iyo sida caadiga ah waxaan uga tagayaa JDownloader iyo qBittorrent hawlahaas.
Waxaan u muuqdaa inaan xoogaa waxqabad la ahay arrinta isha furan: haddii barnaamijku aniga ii shaqeeyo oo uu si fiican u shaqeeyo, waxba igama gelin haddii uu yahay il furan ama xiran. Run ahaantii, qodobkani aniga ima sababayo anshax, jiritaan jira ama khilaafaad kale.
Arrinta "Dial Dial" uma arko inay tahay xaddidaadda Firefox. Dabcan, way ka raaxo badnaan laheyd haddii ay ahaan laheyd shaqeyn ku timid asal ahaan, laakiin maahan waqti badan oo lagu lumiyo rakibidda fiilada.
Waxa aan arko waa dhibaato badan waa xaqiiqda markasta oo Firefox cusbooneysiiso ay joojiso kordhinta, sababo jira awgood, oo aan ku habboonayn noocaas cusub. Sidoo kale waa wax laga xumaado in dib loo bilaabo biraawsarka mar kasta oo hawl cusub la rakibo ama aan beddelno muuqaalka.
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, fadlan, yeynaan ka dhigin boggan mid kale Aad.
Nasiib daro arinta fidinta ee Firefox, waa in markii hore aan laga fikireynin in barnaamijyada la kordhiyo si loogu socodsiiyo howlo kala duwan nidaamka guud ee browserka. daaqad weyn ayey noqon laheyd Waqti ka hor markaan ahaa isticmaale archlinux ah, waxaan ku rakibay badalka flashvideo-ga, laakiin cusbooneysiin fudud ka dib waxay joojisay shaqadii.
"Cillad" kale ayaa ah in Linux, Firefox ay u muuqato wax laga naxo ... hubaal, marka loo eego daabacadaha Windows-ka.
Run, laakiin kde, haddii aadan aqoon, waxaad leedahay oksijiin kde kordhin loogu talagalay firefox, taas oo dhadhankeyga ka dhigeysa firefox inuu ka muuqdo xitaa ka fiican yahay daaqadaha maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad waxyaabo badan xoqdo oo aad horumariso muuqaalka wax badan. Sii isku day haddii aad isticmaasho kde.
Salaan Tina Toledo:
Hagaag, isku deyi maayo inaan mugdiyo, saxo ama ku saxo arintan midii saaxiibkay pandev92 qoray. Ujeeddadaydu kama dhaafin inaan ku soo ururiyo faallooyin, taas oo ah waxa dhib ku ah adeegsadayaasha daalacashadaas, ama halkii, ay jeclaan lahaayeen in mid walbaa yeesho. Waxaa laga yaabaa inaanan sida ugu fiican u samayn, laakiin taasi waxay ahayd ujeedadayda.
Dhamaadka mid ka mid ah ceebaha waaweyn ee Firefox waa la xaliyay, ama waxay umuuqataa:
Anigu waxaan ahay Firefox iyo Midori isticmaale, waana ku raacsanahay arrinta midaysan ee menu. Haddii aan ahaan lahaa horumariye, waxaan qaadan lahaa menu-ka mideysan ee Midori, kaas oo aan u maleynayo inuu ka fiican yahay (waa sida isticmaalka aaladda toolbar oo taagan). Haddii aysan ahayn xaqiiqda ah inaan jeclahay kordhinta arimaha gaarka ah ee loo yaqaan 'firefox' (adblock plus, ghostery, iyo betterprivacy) iyo downthemall (kordhinta maareeyaha soo dejinta), waxaan u isticmaali lahaa midori asal ahaan (marka lagu daro waan jeclahay sida ay ula jaanqaadayso xfce iyo gtk).
Haddii waxa aad rabto ay tahay asturnaan isticmaal mashiinkan raadinta: http://yacy.net/es/
Ma aanan ogeyn mashruucaas. Weli, waxaan u isticmaalaa duckduckgo mashiinka raadinta ugu weyn. Waxa kale oo jira ixquick.
Waxaan isticmaalaa YaCy iyo Ixquick laakiin YaCy maadaama ay p2p tahay ficil ahaan macquul maahan in lala socdo raadinta maadama aan wax la duubin.
Waxaan u adeegsadaa Firefox kan ugu weyn iyo adeegyada google qaarkood waxaan u isticmaalaa chrome maadaama ay si fiican u shaqeyso.
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa daawashada fiidiyowyada flash-ka ee Chrome iyo Opera, waxay u muuqdaan kuwo gaabis ah D:
Isbeddelka Firefox wuxuu u eg yahay si dhammaystiran Ma ogi sababta ay taasi u dhici doonto: l
In ka badan su'aalaha farsamada, waxaan u jeedaa sababta?
1aad - Waxaan u isticmaalaa "Google Chrome" (xasilloon) xawaareheeda, maamulkeeda keydka wanaagsan iyo aaladdeeda cajiibka ah ee soo-saareyaasha.
2aad - Waxaan u isticmaalaa "Iceweasel" (Firefox) qaabkeedii ugu dambeeyay, hadda waa 9.0.1. Waddo aad ugu dhowaatid taariikhda Debian.
Xaqiiqdii ma jiro biraawsar dhammaantiis leeyahay. Si kastaba ha noqotee, waxaan faallo ka bixin doonaa dhinacyo qaar (oo guud ahaan khuseeya qof walba) oo aan loo isticmaali karin ugu yaraan qaabkii dhaqan ahaan loo adeegsan jiray.
Kordhinta: Ma eedeynayo qofna maxaa yeelay sidoo kale waan ku dhibtooday taas, laakiin kordhinta oo ka fog inay noqoto wanaag oo u adeegta in lagu soo qaado dhibcaha qiimeynta biraawsarka, waxaan u arkaa inay yihiin kuwo ka soo horjeeda. Haddii codsi u baahan yahay balastarro si loo qanciyo isticmaaleyaashiisa, wax baa fashilmay oo wax badan oo balastar ah oo ay u baahan yihiin, waxyaabaha ugu xun ayaa noqon doona, sidaa darteed baahida loo sii dheereyntu waa mid laga soo horjeedo oo helitaanka badan ee iyaga ka mid ahi waxay noqon kartaa astaamo iyo darnaanta qaladkaas.
Marka lagu daro xaqiiqda ah in jiritaanka kordhin dheeraad ah ay noqon karto mid taban, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay wanaag in ay jiraan tiro aad u badan oo iyaga ka mid ah, sidaas darteedna qalalan oo aan nuunis lahayn, iyada oo aan la tixgelin, tusaale ahaan, in:
- Immisa ayaa runtii waxtar leh oo aan ahayn buuxiyo bulk iyo bulsh.
- Immisaa imika adeegaysa oo aan duugoobin ama jabinin noocyadii ugu dambeeyay ee biraawsarka aasaasiga ah.
- Dhammaan daalac yaashu isku cilladood ma wada aha, sidaa darteed biraawsar aad u dhammaystiran ayaa ku fiicnaan kara in yar oo la kordhiyo, cilladna ma noqon karto in wax yar la haysto! Dhinaca kale, baare kale oo dhammaystiran oo aan dhammaystirnayn ayaa sax ah haddii ay badankood leeyihiin. Marka lambarrada kordhinta badanaa la isbarbar dhigo, waxay umuuqataa in loo maleynayo in daalacashada oo dhami ay isku mid yihiin dabcanna aysan ahayn.
Isticmaal: Horey ayaan sifiican ugusoo sheegay maqaal kale, laakiin waxaan sameyn doonaa soo koobid yar.
Isticmaalku waa arrin inta badan loola dhaqmo si aad u liidata maadaama ay noqotay wax iska caadi ah ("dadka caadiga ah" iyo "geeks") in "wax yar la cuno" ay wanaagsan tahay oo "wax ka badan la cuno" ay xun tahay oo ay gebi ahaanba ilowday in Isticmaarku aanu ahayn waxa ugu weyn, laakiin Waxqabadka.
Ujeeddada koowaad ee dalab kasta waa in la bixiyo Waxqabad iyo Waxqabad iyo codsiyada waa inay u Isticmaalaan Kheyraadka si ay u siiyaan iyaga, Qalabka waa in loo adeegsadaa oo si wanaagsan loo adeegsadaa. Haddii codsi uu bixiyo waxqabad wanaagsan iyo waxqabad markaa si sax ah ayuu wax u cunayaa; Dhinaca kale, haddii mid kale wax yar cuno oo gurguurto oo la calaamadeeyo, weligeed ka fiicnaan mayso wax ka yar, ka soo horjeedkeeda si liidata ayaa loo qaabeeyey, laga yaabee ujeeddo sababta oo ah hadda waxay umuuqataa in loo horumariyay "imtixaannada" iyo " tilmaamaha ".
Intaas waxaa sii dheer, dhammaan codsiyada ma lahan daaweyn isku mid ah ee kheyraadka laakiin waxay la jaan qaadayaan qalabka meesha ay joogaan. Taasi waa sababta aad marar badan u aragto waxyaabo ay ka mid yihiin "Opera ayaa aad ii cunaysa" iyo tan kale "Waxaan hayaa mashiin aad u yar oo Opera ah ayaa i wada baabba 'inta kale oo runtiina waa tan sida ugu fiican u shaqeysa".
Muuqaalka Goobta: Nasiib darrose sidoo kale waxay noqoneysaa hadal macno leh waxayna umuuqataa in la ilaaway in boggaga loo sameeyay inay ka shaqeeyaan daalacashada X, intaas waa intaas oo waligeedba sidaasay ahayd, laga soo bilaabo maalmihii Netscape, illaa IE iyo hadda oo la socda Firefox (iyo hadhow Chrome) , ugu yaraan Google oo leh boggooda).
Muunadda waxaan uga tagayaa badhan, Halkan Waa la arki karaa waxa iska cad, horumariyayaashu waxay ka dhigayaan goobahooda shabakad gaar ah oo la jecel yahay dabcan tani marwalba way "si fiican u tusi doontaa boggaga" (haddii kale, ma tixgelin doonaan shaqadooda inay dhammaatay, miyaanay ahayn?), Laakiin sidoo kale waxaan aragnaa ku dhowaad maya dhibaatada tijaabinta daalacayaasha kale !!, sabab kastoo jirta.
Marka la soo koobo, heerar ama hooyooyin midna, waligeed ma noqonin wax mudnaan ah biraawsarka si uu u muujiyo bogagga si fiican taasna kama dhigayso hal biraawsar mid ka heer sarreeya kan kale. Waxaan ku dhihi lahaa fadlan dib ha ugu laabanin waqtigii sameynta biraawsarayaasha "de facto standard", xitaa hadii aan "jecel nahay" midkaas; laakiin weligay kama tegin xilligaas, kaliya magaca "walaalkii weynaa" ayaa is beddelay. Waxa aan weydiistaa waa in aynaan iska indha tirin in aan wali ku noolahay xaqiiqadaas.
Runtii kuma raacsani waxaad ka leedahay kordhinta. Way ku adagtahay biraawsar taxane ah inuu ku daro waxyaabo badan ama waxqabadyo, marka laga reebo xaqiiqda ah in horumariyeyaasha biraawsarku ay tixgelinayaan waxa lagu darayo iyo waxa aan ku jirin, waxa adeegsadayaashu jeclaan karaan iyo wixii aan ahayn, iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo aan la xirin biraawsarka waxyaabaha ay isticmaaleyaashu isticmaali doonin.
Waxaa jira qaar loo isticmaali karo sida caadiga ah shaqadooda awgood laakiin tani waxay ka dhigeysaa biraawsarka mid qaabaysan iyo in isticmaalegu uu ku daro waxa ay isticmaalayaan iyo waxay u baahan yihiin.
Mid ka mid ah waxyaabaha aanan ka helin opera ayaa ah inay la timid heer ay ku raran yihiin waxyaabo aanan u baahnayn sida akhristaha RSS, maareeyaha boostada…. Ma xuma haddii ay la mid yihiin kordhin oo si gooni gooni ah loo dhejin karo sidaasna ka dhigaysa biraawsarka mid qaabaysan oo aan lagu shuban waxyaabaha laga yaabo in adeegsadayaashu aysan u baahnayn.
Koox kasta oo horumarineed waxay leedahay qaab u gaar ah oo ay wax ku aragto, macquul ma ahan in la helo codsi 100% naftiisa u qumman ama ku habboon dhammaan dadka isticmaala, laakiin waxaan u maleynayaa in ka modulada badan uu ka sii fiican yahay oo uusan "ku soo rogin ama ku xirin waxyaabo badan waxyaabaha ugu talagal ahaan ".
In kasta oo ay ku raran yihiin waxyaabo, hadaadan isticmaalin iyagu ma kharash gareeyaan ilaha dhaqaalaha, runti quruxda opera ayaa ah inaysan la mid ahayn daalacayaasha kale, hadii ay la mid noqon laheyd kuwa kale markaa qiimo ma lahan, maadaama ay waxay noqon laheyd wax badan oo isku mid ah, waayo taasi way fiicnaan laheyd in la isticmaalo biraawsarka webkit.
Si buuxda iima aadan fahmin, anigu ma dhahayo daalacayaasha ayaa wax walba u keenaya dhadhanka isticmaale kasta oo suurtagal ah. Codsi, qof kasta (laakiin hadda xaaladdu waa biraawsar) waa inuu ku jiraa taxane wanaagsan oo astaamo ah oo waxtar u leh ujeeddooyinka la soo jeediyay, ma awoodi doono inuu dhammaantood wada yeesho mana aha inay sidaa yeelaan, laakiin isku dayga waa mid togan, marna taban, xaqiiqda taban waa in la sameeyo wax ka soo horjeedda.
Waxa aan dhahayo, oo aanan rabin inaan cunsuriyad midabbo leh lahaado, waa inaan u baahanahay! (aan "lahayn") fidinta iyo haysashada wax yar oo astaamo udhaxeeya ayaa umuuqda in loo tixgelinayo khad buluug ah oo kor u jeeda, marka aag kale oo kasta waxaa loo tixgalinayaa xariiq casaan ah oo hoos u sii jeeda, taas oo sidoo kale noqon doonta qaab sax ah. Maxay yihiin ciyaartoyda aad doorbideyso? Ka waran tifaftireyaasha garaafka iyo sawir qaadista sawirrada? iyo sidaas tusaale kasta; Waan hubaa in badankood ay doortaan kuwa ugu dhameystiran isticmaalka dabiiciga ah.
Mana dhihi karo kordhintu ma ahan inay jirto, laakiin inbadan oo ay jiraan, ayaa inbadan calaamad u ah suurtagalnimada jiritaanka dhibaatadii hore, maxaa yeelay wax "jajab yar" ayaa ubaahan "qashin yar." Marka dhinacan looma tixgelin karo inuu leeyahay farxad! Taas bedelkeed, haddii ay jiraan ballaadhinno badan waxay u egtahay in khadkaas cas uu hoos usii socdo. Hadana haddii baahi loo qabo kordhin dheeri ah ay sii weynaato, waa hubaal khadkaas oo hoos u sii jeeda.
Laga soo bilaabo Firefox-ka cusub uma baahni ama ma doonayo inaan ku arko Panorama / Tab Candy oo rinjiga ku jira, hase yeeshee waan ka saari kari waayey. Waxaa la mid ah Firefox Sync, aniguna meesha kama saari karin, hase yeeshe tani waxay umuuqataa mid waxtar badan u leh dhowr mana dhaleeceynayo ku daritaankeeda wax badan. Ma arko qof ka cabanaya sida loo “raro” Firefox.
Ku saabsan sameynta biraawsar caadaysi ah mararka qaarkood aniga doqon bay ila tahay, waxaan isticmaali jiray dhowr dheeri, kuwa hagaajiyay isticmaalka iyo wax soo saarkeyga wax badan, xitaa doqon ma ahan. Waan joojiyay isticmaalkeeda maxaa yeelay waxqabadka Firefox (wax badan) wuu ka xumaa iyaga. Caajisnimadayda ugu weyn waxay ahayd inaan arko in Opera uu yahay iftiin: S.
Iyadoo daalacashada ay u dhaceyso si la mid ah taleefoonada gacanta: shan iyo toban sano ka hor shaqadeedu waxay ahayd inay isaga u hadasho sida taleefan kasta oo caadi ah oo ay ku jirto faa iidada moobiilku, laakiin maanta ma uur qaadi karno iyadoo aan la helin dhammaan howlahaas cusub, xitaa qaar ka mid ah iyaga superfluous.
Waxaan jecelahay jiritaanka kordhinta oo ku daraya shaqeynta biraawsarrada, marka laga eego, uma muuqato inay ka maqan yihiin:
Browserkee adeegsadaa ..
Doesn't Iima tusayso bar soo dejineed ama ma joojinayso hawsha?
Waxba igama gelin, sababtoo ah waxaan isticmaalaa JDownloader oo waliba dhakhso badan.
Does Iima ogola in aan arko e-maylka cusub ee soo gaadhay koontadayda GMail?
Waxaan ku leeyahay aaladda Qaahira Dock oo igu wargalinaysa fariin kasta oo cusub haddii browserka webku furan yahay iyo haddii kale.
Download Soo degsan mayso feylasha durdurka?
Hagaag, wali waxaan isticmaalaa qBittorrent.
Waxay ila tahay aniga in su'aasha shaqeynta ay kuxirantahay shaqsiyaadka adeegsada shaqsiyadeed umana muuqato aniga inay tahay faa iido ama qasaaro in biraawsar uu yeesho asal ahaan ama maya. Ka waran haddii aan u arko inay aad u xun tahay, oo aan hore u idhi, waa inaan dib u bilaabo biraawsarka mar kasta oo aan rakibo balastar ama shaki haddii aan cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeyay maxaa yeelay ma garanayo kordhinta shaqeyn doonta iyo kuwa shaqeyn doona maahan. Taasi waa la'aanta daran ee Firefox waana in laqoro.
Jdownloader si kasta oo ay ufiicantahay, anigu uma arko tusaale wanaagsan oo ah waxa sifiican usocda, hada tusaale ahaan waxaan sooqaadayaa clementine 1.0, waxaan dhagaystaa muusigga tomahawk iyo waxaan ku daalacanayaa opera, hadii aan furo jdownloader soo degsasho waxaan sababi lahaa Wadar qaboojiyaha pc-ga, xusuusnow inay tahay java hadaadan taxaddarinna si fudud ayey u isticmaali kartaa wax ka badan biraawsarrada suuqa ku jira (opera, chrome, firefox iwm ...)
Haddii Firefox ay dhibaato tahay, waa inay sameeyaan sida kuwa opera, waxay leeyihiin xoogaa fidin ah laakiin taasi qayb kama ahan biraawsarka, oo ka baxsan.
... hadaan furo jdownloader si aan u soo dejisto waxaan sababayaa guud ahaan qaboojinta pc-ga, xusuusnow inay tahay java hadaadan ka taxaddarinna waxay si fudud u cuni kartaa wax ka badan biraawsarro suuqa ku jira.
Hagaag, laakiin wali in kheyraadku uu qaraabo yahay, kiiskeyga waxaan kuheli karaa Clementine furan, biraawsar kasta oo caadi ahaan Firefox- ah barnaamij naqshadeyn ah oo awood u leh inuu adeegsado JDownloader anigoo aan PC-du iga foorarin.
Runtu waxay tahay inaanan waligay ogaan qodobka kheyraadka markii la isticmaalayo JD iyo waxa aan jeclahay waa in celcelis ahaan aan soo dejiyo feyl xawaare u dhexeeya 450 ilaa 600mbs. Xaqiiqdii, waxa aan ku qasbanahay inaan jaangooyo ayaa ah inaysan ka badnayn 700mbs maxaa yeelay markaa hoos u dhaca ayaa ah inay ku baabbe'eyso xaddiga badan ee xadka internetka.
Baaragaraafkaaga koowaad ayaa runta oo dhan sheegaya. In kasta oo shaqada taleefannada gacantu ay si fudud "uga hadlayaan taleefanka" maanta waxay noqonaysaa mid aan la qaadan karin oo aan keenin "aasaasi" iyo astaamo waxtar leh, oo laga yaabo inayna waxtar u lahayn qof walba laakiin tiro badan. Isla sidaas oo kale ayey ku dhacdaa daalacayaasha, laakiin markay tahay kordhintooda iyo tiradooda, dhinacan xisaabta laguma darsan doono, laakiin waxay sii wadaysaa inay la hadasho sidii xilligii ay daalacayaashu kaliya URL-ka dhajin lahaayeen (9x sano). Waxay u egtahay in marka laga hadlayo taleefannada gacanta ay isbarbar dhigayaan midkoodna "kordhin" dheeraad ah la ammaano, laakiin waxaa soo baxday inay jiraan hal (ya) aan xitaa lahayn wax ajande ah maxaa yeelay adigu waad rakibaysaa leh kordhin. Intaas oo kaliya maahan, waxay la mid tahay hadday taasi jirto markaa waa la maqli lahaa "way ka fiican tahay sidan, maxaa yeelay kuwa kale ayaa kuu keenaya ajende laakiin waxaa laga yaabaa inaadan jeclayn, halkii aad halkaan ka dooran lahayd midka aad ugu jeceshahay."
Waxaan mar kale xusaa xaqiiqda ah inaad tiraahdo daalacayaasha waxay ku dhacdaa inay la yimaadaan hawlo badan oo ka badan kaliya daalacashada. Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah in waxyaabo badan oo ka mid ah astaamahaas oo maanta qofna uusan noolaan karin qof walbana uu u aqbalo inuu aasaasi u yahay biraawsarka muddo dheer ayuu ku jiray Opera, laakiin markii Opera ay laheyd waxaa soo baxday in la "raray" iyo waxa qabow ayaa ku dari jiray iyaga oo ah kordhin. Isku soo wada duuboo, wax la mid ah "A wuxuu keenayaa waxyaabo X ah sidaa darteed waa u xun yahay, dhanka B waxaad ku dari kartaa waxyaabaha X sidaa darteed way fiicantahay; markaa B wuxuu keenaa waxyaabo X ah markaa way wanaagsan tahay oo A weli way xun tahay maxaa yeelay waa A »:). Tan waxaan mar horeba u maleynayaa inay tahay cudur daar loo sameeyay in la cabbiro waxna aan ka badneyn.
Inta soo hartay waxaan u maleynayaa jawaabta aan siiyay joon127 waa lagu dabaqi karaa maxaa yeelay ma dhahayo yaan la kordhin, laakiin ... iwm, si fiican ayaan halkaas ugu sharaxi doonaa.
Wixii aad ku tidhaahdo sadarkaaga ugu dambeeya runti waad saxan tahay, laakiin cid maqashaa ma jirto: S. Xitaa waxaan helay sababeyn nooca ah "tan ayaa ka wanaagsan maxaa yeelay ...".
Qaabkaaga ayaa iila muuqda mid ila sax ah, si kastaba ha ahaatee waxaa jira hal shay oo aanan ku raacsanayn: Ma xaqiijin karo inay baahiyahaygu la mid yihiin kuwa qof walba.
Maxaan isku dayayaa inaan tan kuugu sheego? Hagaag, si fudud inay jiraan isticmaaleyaal, sidaada oo kale, oo doorbida Opera Sababtoo ah shaqeynteeda caadiga ah, dadka kale waxay doorbidayaan qaabka qaabdhismeedka "La saari karo" de Firefox iyo kuwa kale midna midna.
Maxay tahay ujeedada aan ku go'aamin karno, cabsi la'aan qalad, maxay shaqeynayaan «Waa wax lama huraan ah in maalmahan qofna uusan noolaan karin (?) La'aantood»? Taas oo ah baahidayada iyo, xaalado badan, dhadhankeenna gaarka ah ama baahida gaarka ah ee qof walba?
Dhinaca kale, yaa u baahan fidinta: ma biraawsarka ama isticmaalaha? Hadana waxay kuxirantahay waxa loobaahanyahay, guud ama kiisaska gaarka ah?
Sidaa si la mid ah, idinla wadaagi maayo fikradda ah in lagu kordhiyo kordhintu waa in la hagaajiyo nasashooyinka ama cilladaha maxaa yeelay markaa waxaan iska indho tiraynaa waxa ay ugu adeegaan ADD functionalities, sidaa darteed magaca aad u of Kordhin.
Waxa aan kula wadaago waa taas in kastoo Firefox Waxay leedahay liis garayn ballaadhan oo iyaga ka mid ah, weli iyaga si aad ah ayey u maamushaa.
Iman quiman dijo
Uma socdo inaan is difaaco, maxaa yeelay qof kastaa wuu arki doonaa wuxuu doortay inuu maro ... laakiin waxyaalaha qaarkood ee ku saabsan Chrome / Chromium ee aad sheegtay oo si fudud lagu xallin karo. Waxaan rajeynayaa inay caawiso qaar.
RSS kordhinta rukunka. Qof kastaa ma isticmaalo RSS, waxaan u maleynayaa inay aad nooga yaryihiin kuwa isticmaala.
Shaki la'aan Boqorka, laakiin sidoo kale inta udhaxeysa noocyada isbeddelaya, waa boqorka si ay shaqada u joojiyaan. Markii aan ugu dambayntii helay beddelaadda dhammaan wixii aan ku haystay FF, waxay ahayd markii aan si joogto ah u beddelay ... iyo haddii kuwa loo yaqaan 'Greasemonkey' loo baahdo, waa la rakibayaa iyada oo aan dhibaato jirin oo aan dheeri dheeraad ah lahayn.
Aragti aad u shaqsiyeed xilligan, maxaa yeelay kordhintu waa sida dhadhanka ... iyo midabadaas.
Wakiilka Wareejinta! waa xalka. Aad loo qaabeyn karo oo sahlan in gacanta la beddelo ama si toos ah go'aan looga gaaro.
By the way, DNS waa laga habeyn karaa Browser-ka mana ahan mid OS ku tiirsan.
Anigu iskuma dayin soo dejinta Opera, laakiin dhab ahaan waxa ugu badan ee aan ugu baahanahay biraawsarka waa inaan soo dejiyo faylasha iyo haddii aan doonayo inaan u oggolaado inaan doorto galka. Dheeraadku waa in la hakin karo ama la sii wadi karo hadhow. Inta kale, maareeyaha soo dejinta sida jDownloader ayaa ka fiican.
Waxaan u maleynayaa in tan aad ku khaldan tahay ... ama ugu yaraan waan sameeyaa. Markii aad nuqul ka sameysato URL oo aad gujiso barta cinwaanka badhanka saxda ah, "Paste and go" ayaa soo muuqan doonta. Waxay leedahay aalado kale sida markaad kujirto xiriiriye u muuqda wax caadi u ah daalacayaasha oo dhan inay ku furaan tab kale, daaqad kale ama daaqadaha kale ee aan qarin.
Hadana haddii aad doorato qoraal, waxaad helaysaa ikhtiyaarka: Raadi Google (ama mashiinka raadinta ee aad leedahay markii hore) "qoraalka la xushay."
Jawaab € quiman